Banyere Anyị - Shenzhen Inshare Technology Co., Ltd.
E-ihe ọṅụṅụ ngwaike
Shenzhen Inshare Technology Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise tụnyere R & D, mmepụta na ahịa nke electronic sịga. Dị ka a na-eduga na pụrụ iche imewe echiche na ike ngwọta soplaya na ụlọ ọrụ, anyị na-enye mpi, ahaziri na-eri-irè ngwọta na ọrụ maka e-sịga na-eji ọkụ, ọwa na enye na nkesa na-enyere ha aka nke ọma. Anyị meriri ụwa abụọ na klas ukpono: "Best Product Award" na TPC Ụtaba Gosi na Las Vegas na "Kwa Afọ Product Award" nke Vaper Fair & Shisha Messe na Frankfurt, Germany na 2015. Anyị s trictly implements ISO9001 quality management usoro na ISO14001 gburugburu ebe obibi management usoro ụkpụrụ, nke ana achi achi kwụsie ike na nchekwa nke electronic sịga na ngwaahịa. anyị esoro ụkpụrụ nke "ndị ahịa mbụ, àgwà mbụ, aha mbụ", ka na-enye nke kacha mma mma ọrụ anyị mmekọ.
Factory Ngosi Hall
Dị ka otu n'ime ndị mbụ ụlọ ọrụ aku ọkachamara R & D na mmepụta nke electronic sịga ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ kpụrụ ya pụrụ iche ngwaahịa yinye. O meriwo a aha ọma na ahịa. The ngwaahịa na-exported ka North America, South America, Europe, Russia, Southeast Asia na ndị ọzọ na 48 mba na mpaghara. Inshare bụ otu n'ime ole na ole obodo-larịị elu-tech ụlọ ọrụ na onwe ha ụdị na onwe ha ikike arịa amamihe na ndị ụlọ ọrụ. Ọ nwere ihe fọrọ nke nta 100 na ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ, ọdịdị nchọpụta Kemịkalụ na mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ.
Inshare-agba mbọ ka enye "n'oge kwesịrị ekwesị, ọrụ na ezi obi na-ejere ọhụrụ na ndị agadi ahịa". "Iji bụrụ ndị ụwa si eduga ike soplaya electronic sịga na ọhụrụ na-emepụta sịga R & D, mmepụta na ahịa", na-enyere ịzọpụta ike ma belata umu anwuru, green na gburugburu ebe obibi-echebe, maka ndị ahịa Mepụta a ike ndụ dị ka anyị bịara, na-elekwasị anya na ndị ahịa mkpa , na nọgidere mma izute ahịa mkpa.
Inshare ekwusi na onwe ha nnyocha na mmepe na ike a pụrụ iche e-sịga ika. Ugbu a, ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 11 ngwaahịa ika ahịrị, na mepụtakwara na ẹkenam a ọnụ ọgụgụ nke e-sịga teknụzụ, dị ka igbe MOD, ọgụgụ isi ike mgbazi, stepless iwu, na àjà ihe ọṅụṅụ-nkenke. Okpomọkụ akara, nnọọ ala ike na njikere, edo kpo oku, owu-free mmanụ edu technology, batrị ngwa ngwa Nchaji, ala okpomọkụ combustion technology, wdg Ọ bụkwa otu n'ime ndị mbụ electronic sịga na ụlọ ọrụ ndị inyocha mmepe nke nchekwa, batrị, emechi anwụrụ ọkụ mmanụ usoro na teknụzụ ndị ọzọ. A ọnụ ọgụgụ nke teknụzụ aghọwo ndị ụlọ ọrụ ọkọlọtọ.
Ikike nchọpụta na Asambodo
The ụlọ ọrụ nwere oké cohesion na obi mmadu enterprise omenala, na-akwado eziokwu, pragmatic na otutu.
Company management scientization, àgwà akara Standardization; marketing management normalisation, ọrụ management starization. Scientific management ike ife elu, na pursuance mma iwu narị afọ nke aha.
Talent - One otu One dream
Ịchịkọta a ìgwè nke ọma management, nka, na superego elites; jisiri ke Mee a na-amụta na nzukọ, iji mezuo onwe anyị site hardwork, mma selfvalue, ichu àgwà na mmepe achikota na otu spirit, na-enwe ọganihu na ụfọdụ site na-aga n'ihu mmụta
Heritage - Yi ndụ Iberibe dream
Culture nkwụnye ego na-enye anyị na-eche echiche n'obi; Times na-emekarị na-enye anyị na-efe efe nku ya; ebu mmetụta, dream ijiji, na-ekwughachi ihe mmụọ nsọ nke anyị ụlọ ọrụ, anyị ga-achọ ịrị elu karịa eluigwe.
Anyị na-arụ ọrụ 24/7, na-akpọ anyị mgbe ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị anaghị zaghachi adọ, anyị ga-akpọ azụ ka anya dị ka o kwere omume.
Ekwentị: 86 189 2847 0348
Alibaba Deep Asambodo
Disposable E Siga , Disposable Cbd Hardware , E-ọṅụṅụ Hardware , Cbd Hardware , E-Siga , Original Vape Pen,